Previous Article Ọkụ Agbagwòóla Otu Ụlọ Na Ọtụtụ Ngwongwo n'Ọnịtshà
Next Article Ọkụ Ọgbụgba Egbuola Ụmụaka Atọ n'Obosi, Gbarìkọọ Ebe A Na-Añụ Mmanya
Nke a bụ nke e mere ka a mara site n'ozi a kụpụrụ nso nso a, bụkwa nke kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka azụmahịa, ịtụ mgbere ahịa na ikewàpụta akụnụba, bụ Maazị Christian Madụbuko binyere aka na ya. Dịka ya bụ ozi siri kọwaa, ebumnobi nke ahụ bụ iji wee bèlata agbakata akwụrụ, mee ka efè dị n'okporo ụzọ, ma kwàlitekwa ezi adịmọcha gburugburù.
Kọmishọna, site n'ozi ahụ gakwara n'ihu kpọkuo onye ọbụla na steeti ahụ ka o nye aka n'ịkwàlite na ịhụ na e nwere ezi ọnọdụ gburugburu bụ ịgbà, dịka ọ bụ ihe dị oke mkpà ga-ényékwa aka n'ịkwàlite mmepe na ịma mma nke steeti ahụ.
Onye ọbụla nupùrù isi na ntuzi aka ahụ ma kachie ntị na-ebugharị ma ọ bụ na-ere ahịa n'okporo ụzọ, dịka ozi ahụ siri kwuo, ga-abụzịkwa onye a ga-anwụchikọ, kpụpụ ụlọ ikpe ozigbo, ma were usoro iwu tie ya mmanwụ.
Anyị ga-echeta na ọtụtụ ndị mmadụ atụfuola ndị ha na nke ndị ha hụrụ n'anya site n'ịzụ ahịa mbugharị na ịzụ ahịa n'okporo ụzọ, n'ihi ọtụtụ ihe egwu dị iche iche na-esi na ya apụtakarị oge ọbụla.